Whitepapers Iyo Inotengesa Kutengesa: 5 Matipi
Mugovera, Nyamavhuvhu 23, 2014 NeChishanu, Nyamavhuvhu 22, 2014 Douglas Karr
Vhiki rega rega, ndinotora mapepa evachena uye ndoverenga. Pakupedzisira, simba re whipepaper rinoyerwa, kwete muhuwandu hwekurodha pasi, asi iyo inotevera mari yawakawana kubva mukuitsikisa. Mamwe mapepa akachena ari nani pane mamwe uye ini ndaida kugovana pfungwa dzangu dzezvandinotenda zvinogadzira chena pepa.
Muchena inopindura yakaoma nyaya ine ruzivo uye inotsigira data. Ndiri kuona mamwe mapepa evachena angadai akangove blog post. Iyo whitepaper hachisi chimwe chinhu chaunoda tarisiro yekuwana zviri nyore online, zvakanyanya kupfuura izvo - kupfuura blog blog, isingasviki eBook.
Muchena inogovera mienzaniso kubva kune vatengi chaivo, tarisiro, kana zvimwe zvinyorwa. Hazvina kukwana kunyora gwaro rinotaura chirevo ichi, iwe unofanirwa kupa humbowo hwechokwadi chazvo.
Muchena ndiye zvinofadza. Kutanga kuratidzwa kuverenga. Kana ini ndichivhura whitepaper uye ndoona Microsoft Clip Art, ini kazhinji handiverengi zvimwe. Zvinoreva kuti munyori haana kutora nguva… zvinoreva kuti vangangodaro vasina kutora nguva yekunyora zvirimo, futi.
Muchena ndiye kwete kugoverwa pachena. Ini ndinofanira kunyoresa mairi. Iwe uri kutengesa ruzivo rwako neruzivo rwangu - uye iwe unofanirwa kundifananidza ini semutungamiri nefomu rinodiwa rekunyoresa. Kumhara Peji mafomu anowanikwa nyore kushandisa chishandiso senge online fomu anovaka. Kana ini ndisina kukoshesa nezvenyaya iyi, ndingadai ndisiri kurodha pasi whitepaper. Ipa peji rakakura rekumhara iro rinotengesa iyo whitepaper uye inounganidza ruzivo.
Iyo 5 kune 25 peji whitepaper inofanira kunge ichimanikidza zvakakwana kwandiri kuti ndikutore sechiremera uye sosi yebasa chero ripi zvaro. Sanganisira zvinyorwa zvekutarisa nenzvimbo dzemanotsi kuitira kuti zvirege kungoverengwa kana kuraswa. Uye usakanganwa kuburitsa ruzivo rwako rwekuonana, webhusaiti, blog uye kushamwaridzana nevanhu mukati memuviri webasa.
Kune nzira dzinoverengeka dzekugadzira chena mapepa ekumanikidza zvakakwana kutyaira kutengesa.
Transparency - Chekutanga kuudza muverengi pachena kuti ungagadzirisa sei dambudziko ravo zvakadzama. Ruzivo rwacho runogumira, kutaura zvazviri, zvekuti vangatoda kukushevedza kuti utarisire dambudziko pane kuzviita ivo pachavo. Do-it-yourselfers vanozoshandisa ruzivo rwako kuzviita vega…. usazvidya moyo… havana kuzokufonera zvakadaro. Ini ndanyora mashoma mapepa ekuvandudza iyo WordPress blog - hapana kushomeka kwevanhu vanondidaidza kuti ndivabatsire kuzviita.
kodzero - Iyo nzira yechipiri ndeyekupa muverengi wako nemibvunzo nemhinduro zvese zvinokodzera iwe sosi yavo zvirinani kupfuura chero ani zvake. Kana iwe uchinyora whitepaper pane "Maitiro ekuhaya iyo Social Media Consultant" uye iwe unopa vatengi vako zvibvumirano zvakavhurika zvavanogona kusiya chero nguva… gadzira icho chikamu chewhiteepaper yako mukutaurirana zvibvumirano! Mune mamwe mazwi, tsigira uye tamba kune ako masimba.
Dana kuAte - Ndiri kushamisika zvechokwadi nemapepa mangani andakaverenga kwandinopedzisa chinyorwa uye ndisina kana ruzivo nezvemunyori, nei vachikwanisa kunyora nezvenyaya iyi, uye kuti vangandibatsira sei mune ramangwana. Kupa yakajeka mafoni-kune-chiito mune yako whitepaper, inosanganisira nhamba yefoni, kero, rako rekutengesa zita remazita uye pikicha, kunyoresa mapeji, email kero ... ese iwo achasimbisa kugona kushandura muverengi.
Tags: Content Marketingsei kunyora whitepapermatsamba ekutengesaWhitepaperkunyora mazano
Jul 24, 2010 na4:16 PM
Mapoinzi makuru, Doug. Ndakaona zvakare kuti makambani mazhinji anoedza kushandisa machena machena kuti akurumidze kutengesa maitiro anosiya maviri ezvakakosha zvigadzirwa. Chekutanga, vari kutsanangura dambudziko rinenge riripo pane zvinorwadza zvinoenderana nezvavanopa sechigadzirwa kana sevhisi, uye chechipiri, chii chinoita kuti vasiyane? Kwete hazvo zviri nani. (Mutengi achasarudza izvozvo, zvisinei kuti kangani mutengesi angazvitaura).
Jul 24, 2010 na9:31 PM
@freighter. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kugadzira meseji inokodzera mukati meiyo whitepaper. Nekutsanangura zvikwaniriso, unogona kuzvisiyanisa!